Shabakadaha, Bentley ma shaqeynayaan? - Geofumadas
Shabakadaha, Bentley ma shaqeynayaan?
Juunyo, 2009 Microstation-Bentley
Maanta waxaan ka soo qaybgalay shirarkii ugu horreeyay ee internetka oo Bentley la soo bandhigay, qaab cusub oo loogu talagalay shirarka sanadlaha ah; waxa uu ugu yeeray BeConnected.
Shaqeynta: La ansixiyey
Ka dib markii aan raaxo la'aan ahay markii ugu dambeysay ee aan isku dayay diiwaan, Waxaan soo laabtay nasiib wacan si aan u aragno in via Media Player ayaa sameeyey videos ama shirarka live si fiican u shaqeeyaan. Dhibaatooyinka caadiga ah ee la sameeyo daabacan, maxaa yeelay taasi macquul maahan.
Sidoo kale habka wada hadalka iyo soo bandhiga bandhigga si wanaagsan ayuu u socdaa, fiidiyoow gabar gabad ah oo qarsoodi ah ayaa ka dhigaysa isbeddelka mana arko wax dhibaato ah. Kadibna, guddi ka mid ah deymaha la helay iyadoo la dhigayo koorsooyinka ayaa la keydiyaa, inkastoo ay muuqdaan saacadaha 24.
Kuwa ugu wanaagsan, in bandhigyada dalbashada, marka la diiwaan geliyo iyo taariikhda la sii daayo waxaa loo arki karaa waqtiyo badan oo la doonayo. audio ay ka qabanayso aad u cad, ha u Cunina bandwidth aad u badan oo xataa waxaad riixi kartaa xawaaraha badhanka in screens mari 20 ilbiriqsi kasta waxa ku noolaan lahayd oo waa ku anfacaya haddii aad rabto in aad u aragto PowerPoint iyo audio lahayn ama qaado qoraalada Waxa kale oo aad dooran kartaa bartilmaameedka barashada horumarka. Guud ahaan, waxqabadka waa fiican yahay waxaanan qiyaasayaa inay heli doonaan wakhti fiican.
Xaaladda kuwa ku nool, waxaad ka bixi kartaa ciyaaro firfircoon, waxay bilaabi doontaa marka ay diyaar tahay.
Mawduuca: La ansixiyay
Taasna si wanaagsan ayay u socdaan, waxaa jira waxyaabo ku filan wadooyinka, jariidada, dhismayaasha, dhirta, macdanta, dhuumaha gaaska iyo shabakadaha adeegyada.
Ugu yaraan mawduuca ayaa u muuqda inuu dhammaystir u yahay meelaha uu Bentley haysto takhasus, kaas oo keenay isaga oo isticmaalaya dad aad u daacad ah oo bilaabay Microstation laakiin hadda ka faa'iideysanaya codsiyada gaarka ah.
Dhageystayaasha: Anigu waxaan qabaa shaki
Waxaa jira wax khasaare ah oo lumaya jidka, taas oo dareemaysa in ay marinayso waddo dhexdhexaad ah oo ka mid ah xarunta shirarka, a Starbuck ee gacanta ku hay oo u fiiri qolka meesha qaddarka dhagaystayaasha iyo PowerPoint ee asalkoodu kugu martiqaado inaad eegto.
Waxaan u maleynayaa in dhinaca kale waa in ay ku qulqulaan macluumaadka inta ay ku xiran tahay aragti ka dib Streaming, laakiin fikirkeyga, dunidu diyaar uma aha arrintan, ugu yaraan shirarka xaadirka ah. Oo this Ma doonayo in aan ka gees aragtiyaha Waayo, waan ogahay tani ay tahay sida dunida socda degaanka ee tababarka, laakiin waxaan si dhab ah u shakiday waxa aan soo aragnay in shirka nool, halkaas oo ay inta badan waa adag tahay in uu soo jiito 25 xiiso ( waxba deg deg ah in la sameeyo) leeyihiin, qaban xiisaha (taasoo lagu qiyaasayo si uu u jiro ka la joogo waxay u jiraan) oo ku qasbi to comment (marka si dhaqso ah si aad u hesho halkaas ka soo bixi oo kaliya u timid inaad weydiiso kaarka). Haddaba waxaa u beddesho in format cusub, halkaas oo suurto gal 25 xiiso yihiin sababta oo ah waxay u baahan yihiin mar dambe dalka Mareykanka, laakiin a muuuuy mashquul jadwalka, dad badan oo aan haysan xirnaanta hufan iyo mar aad bilowdo muujinaya waxay si fudud riix karaa dhinac kale.
Dadka dhagaystayaasha ah ee Bentley maaha mid ka mid ah ESRI ama AutoDesk, halkaas oo aan lahaa in ay la dagaallamaan oo ay gorgortamaan meel loogu talagalay shir ay ku jiraan dadka 200. Bentley waa inay ka fekeraan arrintan, sababta oo ah tababarka internetka waa xal fiican, laakiin waayo-aragnimo ayaa leh in sababta ay u shaqeyneyso waa inay ahaataa ballan aad u adag.
Dhowr sano ka hor, Bentley wuxuu sameeyay sahan ka mid ah kuwa ka qeyb galaya shirarka sanadlaha ah iyo 95% wuxuu sheegay in uu ku qancay; Waxaan u maleynayaa in layligan lagu gudbi doono mar kale waxaanan hubin doonaa in dad badani ay maqnaan doonaan Starbuck.
Mowduuc: waa inuu arko
Waxaan ka qayb qaatay shirkii ay soo bandhigeen Pat Filoteo, oo ka timid Microsoft. Shaqsi ahaan, saboolnimada niyad bandhigga, ninkaan ay joojiyeen la soo dhaafay, laakiin ma line furitaanka geospatial halkaas oo uu ka yimid oo u sheegay in biyo diiran ... waa diiran.
Mawduuca wuxuu ahaa mid xiiso leh bilowga (Space ma aha mid khaas ah) ama sida ay u ahayd Ingiriisi "Muuqaalku maaha mid gaar ah", Saaxiibkani wuxuu isticmaali karaa koorso PowerPoint sababtoo ah dhibaatadiisu waa mid muuqda, maaha wax badan oo asalka ah.
Dib-u-dhiska, nuxurkii mawduuca, meeshani hadda waa xaqiiqo kale, oo badanaaba jawiga webka oo ah qaabaynta ay ahayd shaqo loo adeegsaday codsiyada yar-yar ee loo yaqaan "hybrid" loo yaqaan mashups. Laakiin mawduuca, way liidatay, ka dib ayaan sugayay inaan arko cidda weydiistay ama la tashatay; ama si wacan uma fahmin, in fikradaha nool lagu wada dhegeysto dhammaantiis, ama aamusnaanta aad u dheer.
In la barbardhigo isbarbardhigga u dhexeeya habka caadiga ah ee lagu arko jawiga bannaan, oo ay ku jiraan:
Qabashada iyo caadigeynta isku-duwayaasha
Samee layers khariidad
Samee layers layers
In kasta oo mustaqbalka loo fududeynayo xogta xogta, sababtoo ah dhinaca jiilku waa sifo gaar ah ... daadinta waa arrin ka jirta websade caadiga ah.
Ma noqon lahayd mid xun, si aad u muujiso wax ka badan daabacadaha ee boggaga internetka ee ku soo biiray Dhulka Dunida. graphic A inkastoo AutoShapes (halkii taaga fudud), halkaas oo la arkay in xogta ayaa weli la isku, in waxa aan haatan yihiin miisaska halkii gudbin deegaanka meesha bannaan ee, noqon bandhigay, taas oo ah ra'yiga iyo taas oo naga dhigaysa inaan si joogto ah u aragno inkastoo aan had iyo jeer ka fekerno. Laakiin dhammaadka, waxaan fahmi karaa in Microsoft, ma jiraan wax khaas ah waxa la tusayo ee jawiga banaan ... Google horay ayuu u cunay noolashii.
Waa arrin aad ufiican ... si sahlan ayaannu nooga sheegi karnaa, inaan nahay dhagaystayaasha 😀
Hadda waa inaan sugaa mawduuca juquraafiyeed iyo horumarka dhuleed ee ka bilaabma 1 ee July.
Post Previous«Previous Xagee laga helaa khariidadaha qaab vector ah
Post Next Ku xidh, siminaarada internetka ee 151Next »